Mbola Mitohy ny Fanampiana ny Tra-boina Tamin’ny Rivo-doza Irma sy Maria
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Holandey Hongroà Icibemba Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tailandey Tenin’ny Tanana Italianina Tiorka Tseky Tsonga Vietnamianina Xhosa Yorobà
Efitrano Fanjakana any Tortola, tamin’ny mbola simba sy rehefa vita. Dimy ny Efitrano Fanjakana simban’ny Rivo-doza Maria, tany amin’ny Nosy Vierges Amerikanina sy Britanika, ka io ny iray. Io koa no namboarina voalohany.
NEW YORK—Betsaka ny ezaka efa natao mba hanampiana an’ireo tra-boina tamin’ilay Rivo-doza Irma sy Maria, izay nandravarava faritra be dia be tao Karaiba sy ny manodidina azy, tamin’ny Septambra 2017. Mbola mitohy foana izany ezaka izany, araka ny tatitra voaray avy any amin’ireto sampana ireto: Sampan’i Barbade, Cuba, Repoblika Dominikanina, Frantsa, ary Etazonia. Inona avy no atao amin’izany?
Faritra iandraiketan’ny sampan’i Barbade: Anguilla, Antigua sy Barbude, Dominique, ary Saint-Martin (Holandey)
Nisy Komitin’ny Vonjy Rano Vaky (KVRV) telo natsangana, ka ny sampan’i Barbade sy Frantsa no niara-nanangana ny iray. Nanendry rahalahy sy anabavy avy tao amin’ny faritra tratran’ilay loza ireo komity ireo, mba hikarakara an’izay tena ilain’ny mpitory tra-boina. Rehefa nojerena koa izay zavatra simba tany amin’ireo faritany iandraiketan’ny sampan’i Barbade, dia hita fa 2,4 tapitrisa dolara eo ho eo no ilaina hanamboarana azy. Efitrano Fanjakana 8 sy trano 122 an’ny Vavolombelona, ohatra, no mbola mila amboarina. Trano 19 kosa no nila naverina naorina tanteraka.
Efitrano Fanjakana simba be tamin’ny Rivo-doza Maria, any Grand Bay, any Dominique.
Faritra iandraiketan’ny sampan’i Cuba
Nilaza ny sampan’i Cuba fa tena mila ampiana ny mpitory tra-boina tamin’ilay Rivo-doza Irma, ka efa miezaka manao an’izany ry zareo. Misy solontenan’ny sampana, ohatra, mitsidika an’ireo tra-boina mba hampahery azy ireo.
Faritra iandraiketan’ny sampana any amin’ny Repoblika Dominikanina
Misy 57 ny mpitory tra-boina any, ary telo ny KVRV nikarakara azy ireo. Ny mpiara-manompo koa moa nanome sakafo, rano, akanjo, ary zavatra hafa tena ilaina. Efa voadio sy vita tsara daholo izay trano simba, tamin’ny faran’ny volana Oktobra, ary saika ny mpiasa an-tsitrapo tany daholo no nanao azy.
Faritra iandraiketan’ny sampan’i Frantsa: Goadelopy sy Saint-Martin
Nanangana KVRV tany amin’ny Nosy Saint-Martin ny sampana, dia nasiany foibe hikarakarana an’izay ilain’ny tra-boina koa tany Goadelopy. Ao no andrindrana ny asa fanarenana ny simba. Efa ho 1,4 tapitrisa dolara no ilaina amin’izany. Efitrano Fanjakana 12, ohatra, no mbola mila amboarina any Goadelopy. Roa kosa ny any Saint-Martin, sady miampy trano 24 an’ireo rahalahy tra-boina. Mahatratra 22 ny mpiasa an-tsitrapo avy any Frantsa sy Goadelopy ary Martinika hanampy amin’izany.
Simba be ny fananan’ny mpitory iray any Saint-Martin, taorian’ilay Rivo-doza Maria.
Faritra iandraiketan’ny sampan’i Etazonia: Nosy Vierges Amerikanina sy Britanika, Floride, Géorgie, Porto Rico, ary ny Nosy Turks sy Caïques
Mpitory 13 000 mahery no tra-boina any amin’ireo faritra ireo. Efatra ny KVRV miasa any, ary efa vita ny ampahany voalohany amin’ny asan-dry zareo. Betsaka no simba tamin’ny fananan’ireo rahalahy, nefa efa tafaverina amin’ny laoniny ny 95 isan-jato mahery amin’izany. Efa nomena sakafo sy rano ary zavatra hafa koa ry zareo. Mbola mitohy ny asa any Porto Rico sy any amin’ireo Nosy Vierges Amerikanina sy Britanika.
Mpiasa an-tsitrapo manadio tranona mpitory any Porto Rico. Tranona mpitory 3 200 mahery no simban’ilay rivo-doza.
Raha atambatra, dia 690 ny mpiasa an-tsitrapo hanamboatra an’ireo Efitrano Fanjakana sy trano hafa simba, ka 450 no hiasa any amin’ireo nosy, ary 240 kosa any Floride sy Géorgie. Vola 30 tapitrisa dolara mahery no ilaina amin’ilay fanampiana tra-boina, ary ireto avy no hamboarina:
Nosy Vierges Amerikanina sy Britanika: Efitrano Fanjakana 5 sy trano 190
Floride: Efitrano Fanjakana 40 sy trano 1 174
Porto Rico: Efitrano Fanjakana 106 sy Efitrano Fivoriambe 2 ary trano 1 216
Nosy Turks sy Caïques: Efitrano Fanjakana 2 sy trano 56
Mivavaka isika mba hampaherezin’i Jehovah ny mpiasa an-tsitrapo rehetra manampy tra-boina, ka tsy hiraviravy tanana. Matoky koa isika fa hanampy an’ireo rahalahintsika ho tafarina ireny fanampiana sy fampaherezana ireny, ka ho tafaraka hanompo an’i Jehovah Andriamanitsika indray izy rehetra.—Nehemia 2:18.